Beta beta nke GRID Autosport maka Android bidoro | Gam akporosis
GRID bụ otu n'ime ndị a ma ama ịnya ụgbọ simulators ma ị nwere ike ịrịọ ngwa gị ka ị banye beta mechiri emechi nke GRID Autosport maka gam akporo. Egwuregwu ụgbọ ala dum nke igwe ọrụ ya malitere site ugbu a gaa na ekwentị gị.
Ọ bụ na afọ a 2019 mgbe GRID Autosport ga-abanye na gam akporo mgbe oge na-adịghị anya karịa onye ọzọ. Feral Interactive ekwuputala mmemme beta nke ị nwere ike ịbanye na ụdị Google nke anyị nwere n'okpuru.
GRdị beta nke GRID Autosport na-ekwupụta na ị ga-enwerịrị ngwaọrụ nwere gam akporo 8.0 ma ọ bụ karịa, nwee opekata mpe 4GB nke RAM ma nwee mgbawa Exynos 8890 Octa ma ọ bụ Qualcomm Snapdragon 820 ya na Mali-T880 Mp12 ma obu Adreno 530 GPU.
Ekwesịrị ikwu na ọ nwere ike ime ngwaọrụ ọ bụla anaghị emezu ihe ndị ahụ na na ọ dị mkpụmkpụ ha nwere ike ịnweta beta, yabụ anyị na-akwado ka ịnwale ya naanị. Nwere ike ịnweta ụdị site na njikọ a.
Ozugbo n'ụdị, ị ga-ahọrọ mpaghara ahụ, onye nrụpụta ekwentị, ụdị na ụdị nke sistemụ arụmọrụ gam akporo. Ozugbo abanyela data niile, ị nwere ike ichere maka ọsịsa iji nwalee ụdị 4 dị iche iche nke GRID Autosport. Nke ahụ bụ, ịnwere ike ịnwale ọnọdụ ahụ ma chefuo ndị ọzọ dị ka ụdị ọkpụkpọ otu.
Cheta na site na ịbụ onye sonyere na beta nzuzo ị ga-enye nzaghachi na nchinchi enwere na ụfọdụ nsogbu arụmọrụ. Ọ bụghị banyere igwu egwu maka igwu egwu. Ya mere gafee mkpịsị aka gị na-enwe a dum ụgbọ ala egwuregwu na ga-abụ a bọmbụ ụbọchị a ga-amalite GRID Autosport gaa na Playlọ Ahịa Google. Mgbe i nwere ike gaa na nke a na-elekọta mmadụ na netwọk nke ụgbọala.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Igwe injinị GRID Autosport na-ebigbọ - sonyere ọtụtụ emechiri beta ugbu a